‘वल्र्ड टुर’को तयारीमा रहेका राजेशपायल किन मुम्बई गए ? (यस्ता छन् कारण) | Screennepal
‘वल्र्ड टुर’को तयारीमा रहेका राजेशपायल किन मुम्बई गए ? (यस्ता छन् कारण)
२०७५, २४ श्रावण बिहीबारscreennepalfeature, Music0
काठमाडौं । नेपाली गायन क्षेत्रका मेगास्टार राजेशपायल राई भारतको मुम्बईतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । लाग्छ, राजेशपायल किन मुम्बई हिँडे ? नेपाली कलाकारहरु मूम्बई जानेवित्तिकै बलिउडको सपना बोकेर त्यता लागे भन्ने एउटा मानसिकता नै बसेको छ । तर, यी मेगास्टारचाहिँ आफ्नो महत्वकांक्षी एल्बम ‘दर्शन नमस्ते’ को चौँथो सिरीज तयारी गर्न त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।
‘अब चाँडै दर्शक श्रोतालाई दर्शन नमस्ते–४’ पस्कनेछु’ मुम्बई हिड्नअघि यी चर्चित गायकले भने, ‘यसपटक दर्शन नमस्तेका गीतहरु फरक स्वादमा पस्कने प्रयास गर्दैछु ।’ नेपालमै पनि स्तरिय रेकर्डिङ स्टुडियोहरु भएर पनि किन उता नै जानुप¥यो त ?, ‘राई इज किङ’ रुपमा समेत चर्चित राजेशपायलले भने, ‘त्यो त हो तर, यसपटक मुम्बईमै गीत रेर्कड गर्ने मनशाय भयो । नेपालमा स्तरिय स्टुडियो नभएरचाहिँ होइन ।’ तैपनि उनले काठमाडौंका स्टुडियो र मुम्बईको स्टुडियोमा रेकर्डिङ गरेका गीतमा केही फरक तथा भिन्नता आउने बताए ।
‘दर्शन नमस्त–४’का गीतहरु मुम्बईमा रेकर्डिङ भएपनि संगीतकारहरु भने नेपालकै रहने भएका छन् । उनका अनुसार उक्त एल्बममा अम्बर गुरुङ, रञ्जित गजमेर, उत्तमजंग लिम्बू, बसन्त सापकोटा, अर्जुन पोखरेल, महेश खड्का, पारस मुकारुङ, बादल लिम्बू, बिनोद खम्बुलगायतको संगीत रहने भएको छ । ‘दर्शन नमस्ते–४’का गीतहरु मुम्बईस्थित लत्ता मंगेस्कर स्टुडियोमा रेर्कडिङ हुनेछ । उक्त एल्बमका गीतहरु रेकर्डिङलगत्तै राजेशपायल म्युजिकल वल्र्ड टुरमा निस्किने भएका छन् । आफ्नो सांगीतिक टुर २१ अगस्टमा अबुधावीबाट सुरु हुने यी मेगास्टारले बताए ।
Previous Postराजनीतिमा अभिनेता कमल हसन | भन्छन्, ‘उद्देश्य पूरा भएपछि राजीनामा दिन्छु’ Next Post‘गोर्खाली छोरी...’ बन्दा यस्तो देखिइन् माला लिम्बू (भिडियोसहित)